Angano 3 soavaly fotsy | Soavaly Noti
Angano fotsy 3
rose sanchez | | ny hafa
Ny soavaly koa dia manana ny angano izay notazomina rehefa mandeha ny fotoana, indrindra raha miresaka momba ilay izy isika soavaly fotsy, angano ary saika andriamanitra manodidina azy tantara angano.
Ny vahoaka taloha izay mistery toa ny an'ny Celt dia nanaja ity karazana soavaly ity. Rehefa maty ny iray tamin'ireto specimen ireto dia nalevina izy ireo mba tsy hisy biby handevona ny taolany ka hanana fandevenana mendri-kaja. Nanjary natokana ho mariky ny fahavokarana izy ireo. Ny lohan'ny fianakaviana isan-karazany dia nanao fombafomba izay raha a fotsy vavy Izany dia hitondra fandriam-pahalemana sy fanambinana ho an'ny vahoaka manontolo.
Ity vondrona mpandresy ity dia nanome azy andraikitra ara-pivavahana kokoa noho ny mystika. Tao an-tanànan'i Kilikia, isan'andro dia tsy maintsy nomen'izy ireo ny mpanjaka ny iray amin'ireo santionany ireo satria araka ny finoany dia ny fahatongavan'ilay andriamanitry ny mazava fantatra amin'ny hoe Mithra, tompon'ny kijana maitso rehetra. Ity andriamanitra ity dia nisolo tena tamin'ny kalesy efatra soavaly fotsy mahia izay tsy mety maty kosa. Indraindray, ireo zavaboary ireo dia natao sorona ho fanoloran-tena ho an'ilay andriamanitra voalaza etsy ambony.
Ity tanàna ity koa soavaly fotsy hajaina. Taloha, ny fanaovana sorona ny iray amin'ireo ohatra ireo dia mariky ny fanambinana ho an'ny fanjakana. Ny fomban-drazana dia ny famelana soavaly fotsy, ilay majestic sy tsara indrindra eto amin'ny fanjakana, afaka avaratra atsinanana. Zanakalahin'ny mpanjaka, mpandova ny seza fiandrianana, miaraka amin'ny tanora mpiady, dia tsy maintsy manaraka ny diany nandritra ny herintaona.
Tsy tokony hanaisotra ny fahafahany mihitsy izy ireo, mainka izany fa avelany hanakaiky ny soavaly vavy rehetra izy. Masina ny diany ary ny toerana tsirairay nolalovany dia an'ny mpanjaka ary izy kosa no solontenan'ny masoandro. Rehefa afaka ny taona, nitaingina ny soavaly niverina ho any amin'ny fanjakana ireo mpitaingin-tsoavaly, efa ho faty. Ity fomban-drazana ity dia natao tany amin'ny faramparan'ny fanjakan'ny mpanjaka izay ny tanjony dia ny hampita amin'ny zanany mpandova ny voninahitra, ny fanjakana ary ny faritaniny rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » ny hafa » Angano fotsy 3
Ahoana no mamantatra ny lamosin'ny soavaly
Fitsaboana Equine sy ny zaza autiste